Fact Check – စာမျက်နှာ7– Nyang Media
Fact Checkစက်တင်ဘာ 05, 2020
ကျမတို့ပြင်းထန်စွာ ရှုတ်ချတယ်။ ဒီလိုသုံးတဲ့ အပေါ်မှာလည်း ကန့်ကွက်တယ်။ ကျမတို့နာမည် ကို အလွဲ သုံးစားလုပ်တဲ့ အပေါ်မှာလည်း ပြင်းပြင်းထန်ထန် တားမြစ်တယ် ... ရခိုင် နိုင်ငံရေးသမားတွေ ဖြစ်ကြတဲ့ ဦးဦးလှစော၊ ဒေါ်စောမြရာဇာလင်း နဲ့ ဒေါ်ထုမေ...
Fact Checkစက်တင်ဘာ 03, 2020
အဲဒီပုံက လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်များစွာက အာရှတော်ဝင် မှာ နှလုံး စမ်းသပ်တဲ့ စက်ကြီးဝယ်လာလို့ သွားစစ်ဆေးပေး တာပါ။ပရိတ်ရွတ်ပေး တာပါ။ဒီဓာတ်ပုံကို ... သီတဂူဆရာတော်ကြီး ကိုဗစ် ကူးစက်ခံရတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းအမှား တစ်ပုဒ် အကြောင်းပြောပြ လိုပါတယ်။ သည်သတင်းအမှားကို Zawthein...
NLD အမတ် ငွေကျပ်သိန်း (၇၀၀) ကိုယ်ကျိုးအတွက် သုံးစွဲ ဆိုတဲ့ သတင်းအမှား တစ်ပုဒ်အကြောင်း ပြောပြလိုပါတယ်။ သည်သတင်းအမှားကို တိုင်းကျော်သတင်း လို့ အမည်ရတဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် စာမျက်နှာမှာ သြဂုတ်လ(၂၁) ရက်နေ့ က ဖြန့်ချိထားတာပါ။...
Fact Checkဩဂုတ် 30, 2020
သည်လို အပြုအမူ အခြေအနေတွေကို ဖန်တီးနေသူတွေဟာ ရွေးကောက်ပွဲမှာ နိုင်စရာ အကြောင်း မရှိသလို ရွေးကောက်ပွဲ မနိုင် နိုင်တဲ့ အခြေအနေ အပေါ်တည်ပြီး ... တရားစီရင်ပြီးသား အမှုတစ်ခုကို အခုမှ ဖြစ်သယောင် ပုံမှားရိုက်ပြီး လူမှုကွန်ရက်မှာ...
Fact Checkဩဂုတ် 28, 2020
အဒေါ်ကြီးမှာလည်း ဒဏ်ရာရသွားတယ်။ ကောင်မလေး မှာ လည်း လက်မှာ ပတ်တီးစည်းထားတယ်။ အဲဒီလိုဖြစ်တာ။ လုတာတွေဘာတွေ ... သြဂုတ်လ (၂၈) ရက်နေ့ ညနေပိုင်းလောက်က ပုစွန်တောင်၊ ရေကျော် City Mark အမျိုးသမီး အိမ်သာအတွင်းမှာ...
နိုင်ငံရေးအောက်တန်းကျတာပေါ့။ ညစ်ပတ်တဲ့နိုင်ငံရေးကို ကျင့်သုံးတာပေါ့။ တပ်နဲ့ပြည်ခိုင်ဖြိုးကို ရန်တိုက်ပေး တာပါ။ ဒါပါပဲ။ ဒါတွေကို သိပ်လည်း ... သမိုင်းကြောင်းကောင်းတဲ့ပါတီကိုရွေးချယ်ရန် တပ်ချုပ်ပြောကြားချက်အပေါ် ပြည်ခိုင်ဖြိုး ပြောရေး ဆိုခွင့်ရ ပုဂ္ဂိုလ်များ သဘော မတွေ့ဖြစ်နေ ဆိုတဲ့ သတင်းအမှား...
Fact Checkဩဂုတ် 27, 2020
သာသနာ့အလံတော်၏ ဂုဏ်သိရ်ကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်၍ အလေး ဂရုပြုကြရန်အတွက် သံဃနာယကလက်စွဲ အပိုဒ် ၃၁၈ တွင်"လမ်းဘေး၊ လမ်းဆုံလမ်းခွ၊ မော်တော်ယာဉ်ဆိပ်၊ ရေဆိပ်၊ ဈေးစသော ဌာနတို့၌ အကြောင်းမဲ့ သက်သက် သာသနာ့အလံတော်ကို အသုံးမပြုရ" ... မော်တော်ယာဉ်၊...